आज संविधान दिवस मनाइँदै,नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा ! - हिपमत
आज संविधान दिवस मनाइँदै,नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा !
आज संविधान दिवस मनाइँदैछ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा मार्फत् संविधान घोषणा भएको दिनको सम्झनामा असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारीपछि राजनीतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनमा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय संरचना निर्माण र नागरिक तहसम्म पहुँच भने अझै पुग्न सकेको छैन ।
शनिबार, आश्विन ०३, २०७७मा प्रकाशित गरिएको